တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ဦးဝဏ္ဏနဲ့ မေဓာဝီ
Posted by မေဓာဝီ at 10:38 PM
အဲလို မဟုတ်ပဲ ငါ့သမီးပြောတဲ့ ၀ဏ္ဏနဲ့ အမေစကားပြောချင်တယ်ဆို ဒုက္ခဗျာ :D
2/10/2012 11:12 PM
သူ့ဖာသူ ဦးဝဏ္ဏနဲ့စကားပြောနေတာကို ပိန္နဲပင် လာဆွဲထည့်နေသေးတယ်။း)
2/11/2012 12:11 AM
ဟားဟား.. ဖြစ်ရလေ... အစ်မအမေက ဒီလိုသင်ပေးလို့ရတာတောင် ကံကောင်း.. အစ်မရေ..း))))
2/11/2012 5:22 AM
ဟီး... မမေရဲ့ အမေက ချစ်စရာ ကောင်းတယ်။ အိမ်က မေမေ လဲ အဲသလိုပဲ... ကိုယ်က မတော်တဆ စကားမှားပြောမိလိုက်ရင်... သူထင်တာ သူတွေးပြီး စိတ်ကောက်တတ်တယ်။
တို့တွေ ဖေဖေ လည်း ပထမဆုံး စင်ကာပူကို လာလည်တော့ အင်တာနက် သုံးတာကို ပြောပြအုံးမယ်... အဲဒီတုန်းက Dial up တွေနဲ့ပဲ သုံးရတာကိုးနော်... ကွန်ပြူတာဖွင့်လိုက်ပြီဆို အင်တာနက် တက်ဖို့အတွက် Dial up window လေးပေါ်လာပြီး user name နဲ့ password ဖြည့်ရတယ်။ ဖေဖေ ရောက်လာတော့ ကိုယ်ရုံးသွားတဲ့ အချိန် သူ သုံးလို့ရအောင် user name နဲ့ Password ကို auto လုပ်ပေးခဲ့တာ တစ်ရက်တော့ သုံးနေရင်း သူ log out လုပ်မိတာလား မသိ... password ပြန်ဖြည့်ခိုင်းတာ ဖြည့်မရလို့ သုံးမရဘူးတဲ့။ password မှားတယ်ပဲ ပြောနေသတဲ့.... ဟင်...သမီး password ဖေဖေ့ကို မပေးရသေးဘူးထင်တယ်...ဖေဖေ ဘယ်လို သိလဲပေါ့...ဆိုတော့....အမယ်... ဖေဖေ့များ အ တယ် ထင်နေလားတဲ့... သမီးလုပ်နေတုန်း နောက်က ကြည့်နေတာ.....စတား ၆ခု ထည့်တာ တွေ့နေတာပဲ.... အဲဒီစတား ၆ခု ထည့်လိုက်တာပဲ...မရဘူးတဲ့....ဟီးးးးးးး
2/11/2012 6:27 AM
Thank you for sharing all the tips and tricks. I am planing to teach my mom how to use computer as well.
2/11/2012 7:49 AM
ဟီး ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီပို့စ်ဖတ်ရတာ လန်းဆန်းသွားတယ်... ဦးဇနက မိန့်တာပေါင်းလိုက်တော့ ပိုကြွလာတယ်း)
2/11/2012 8:21 AM
ဦးဝဏ္ဏဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားလို့ တစ်ပုဒ်လုံးကို အာရုံအတင်းစိုက်ပြီး ဖတ်လာတာ...တွေ့မယ့်တွေ့တော့ နောက်ဆုံးမှပဲ တွေ့တော့သကိုး...ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ..သူ့ဟာက ဘယ်လိုဖတ်ဖတ် ဦးဝဏ္ဏဖြစ်နေသကိုး...အမေ့ခမျာ သမီးကလေး မြီးကောင်ပေါက်ကို စိတ်မချတော့လည်း ပြောရှာပေမပေါ့လေး)
ပြောမယ့်သာပြောရတယ် အိမ်က မိဘနှစ်ပါးကိုလည်း အွန်လိုင်းသုံးဖို့ တိုက်တွန်းတာ ဘယ်လိုမှ ပြောလို့မရဘူးလေ...အံမယ် ကျန်တာတွေ အသံထွက်မညီတဲ့ ဖေဖေနဲ့ မေမေက ဒီနေရာကျတော့ နှစ်ယောက်လုံး အသံထွက်ညီသဗျ...မျက်ရိုးကိုက်ပါသကွယ် တဲ့း)
2/11/2012 9:06 AM
မမေရဲ့မေမေနဲု့အပြန်အလှန် ပြောကြဆိုကြနဲ့ စိတ်ကြည်နူးစရာပဲနော်။ နိုင်ငံခြား ရောက်နေတဲ့ တီတင့်ရဲ့မောင်လေး ညီမလေးတွေကို မြန်မာပြည်ကတီတင့်က အွန်လိုင်းကနေ ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးတွေ ပေးရင်းရှင်းပြခဲ့ရတာလေးကို ပြန်သတိရသွားတယ်။ တီတင့်ရဲ့ အိမ်ဦးသခင်ဆိုရင်လည်း ကွန်ပျူတာကို နာရီဝက်ထက်မပိုဘူး ခေါင်းနောက်လို့တဲ့ ဝါသနာပါတာ မပါတာနဲ့ပဲဆိုင်မယ်ထင်တယ်နော်း)) ဦးဝဏ္ဏအကြောင်းဖတ်ရတာ ပါးစပ်ပြန်မပိတ်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်း)
မမေ အမေက မဆိုးဘူးနော်
ချစ်စရာ အလွဲလေးက အမှတ်တမဲ့ကနေ အမှတ်တရ အဖြစ် ကြည်နူးစရာလေးပဲ မမရေ..:):)
2/11/2012 11:30 AM
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ သုံးတတ်သွားရင် ပီတိဖြစ်ရပါတယ်
စာလေးဖတ်ပြီး ပျော်သွားတယ် ဟုတ်ပ ဘယ်က ဦးဝဏ္ဏ နဲ့ စကားပြောနေမှန်း မသိ အမေ တယောက်လုံးပြစ်ထားပြီး သနားပါတယ်
2/11/2012 2:19 PM
အဟိ...အပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေဖတ်လာပြီး ဘယ်သူများလဲ ဦးဝဏ္ဏ ဆိုတာ ကျနော်လည်းစိတ်ဝင်စားနေတာ ဟိဟိ ကြီးကြီး ထင်လည်း ထင်စရာပဲ စာလုံးပေါင်းတွေ ကြည့်တော့ ဟုတ်သား လူကြီးတွေက အသက်တွေ တော်တော်ရလာရင် ခလေးလေးတွေပြန်ဖြစ်လို့ ချစ်စရာကောင်းပြန်ကေား)
2/11/2012 3:47 PM
မမေရဲ့ အဖေအမေက ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ..
အောက်နားလည်းရောက်ရော မပြုံးနိုင်တော့ဘဲနဲ့ ဝါးလုံးကွဲအောင် ရယ်ချပစ်လိုက်တော့တယ်။
အေးလေ မမေက အမေကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ဦးဝဏ္ဏကိုဘဲ ဂရုစိုက်နေတာကိုး
မိဘနဲ့ နေရချိန်တွေက စိတ်ချမ်းသာပြီး ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်နော် မမေ.။
2/11/2012 5:29 PM
တော်တော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပို့ စ်လေးဘဲ။
နောက်မှ ဦးဝဏ္ဏ နဲ့မမေဓါကို မေးစရာရှိသေးတယ်.
2/11/2012 9:06 PM
ဦးဝဏ္ဏနဲ့ ပဲ စကားပြော မနေနဲ့ နော် :P..မမမေ မေမေ တော်တယ်..
You better answer to your mom that U Wanna is current foreign minister who wants some advice from u and discuss about EU matters:D
2/12/2012 6:20 PM
2/13/2012 2:42 PM
ဓာတ်ပုံကြည့်ကတည်းက ကြီးကြီး ကို ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာလို့ တွေးနေတာ...မမေ ရေးထားတဲ့ u wanna talk with me ? ကို လဲ ဦးဝဏ္ဏ နဲ့ မမေ စကားပြောနေတာလို့စစချင်းတွေးမိသေးတယ်...:D ဖတ်ရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းလိုက်တား)
မစုချစ် ရဲ့ ကော်မန့်ကိုဖတ်ပီးလဲ သဘောကျသွားသေးတယ်း)
2/17/2012 4:20 AM
ဦးဝဏ်ဏ က ရည်းစားစာ ပေးမသွားလို့တော်သေးတယ်။
2/24/2012 1:01 PM